သင်၏ LinkedIn ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံသည် မည်မျှအရေးကြီးသနည်း။ | Martech Zone
သင်၏ LinkedIn ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံသည် မည်မျှအရေးကြီးသနည်း။
အင်္ဂါနေ့, ဇန်နဝါရီလ 11, 2022 အင်္ဂါနေ့, ဇန်နဝါရီလ 11, 2022 Douglas Karr
ဟိုတုန်းက နိုင်ငံတကာ ကွန်ဖရင့်တစ်ခုကို ငါတက်ခဲ့ပြီး သူတို့မှာ မင်းပုံပြပြီး ခေါင်းရိုက်နိုင်တဲ့ အလိုအလျောက် ဘူတာတစ်ခုရှိတယ်။ ရလဒ်တွေက အံ့မခန်းပါပဲ… ကင်မရာနောက်ကွယ်က ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးက မင်းရဲ့ဦးခေါင်းကို ပစ်မှတ်တစ်ခုဆီ နေရာချပေးပြီး အလင်းရောင်ကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိပေးပြီး စန်းပွင့်စေပါတယ်… ဓာတ်ပုံတွေကို ရိုက်ယူလိုက်ပါပြီ။ သူတို့အရမ်းကောင်းလာတဲ့ စူပါမော်ဒယ်တစ်ယောက်လို ခံစားရတယ်... ပြီးတော့ သူတို့တွေကို ပရိုဖိုင်တိုင်းဆီ ချက်ချင်းတင်လိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် မဟုတ်ဘူး။ အမှန် ငါ့ကို ကျွန်တော်က စူပါမော်ဒယ်တစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်သည် ရယ်မော၊ ရယ်မောကာ အခြားသူများထံမှ သင်ယူလိုသော ရွှင်မြူးသော၊ မိုက်မဲပြီး ပျော်ရွှင်ထွားကျိုင်းသော လူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏သမီးနှင့် ကျွန်ုပ်သိသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် စကားပြောရန် ထိုင်နေပါသည်။ ငါ့သမီး… ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမှ ဓာတ်ပုံမရိုက်နိုင်တော့တဲ့… ငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ရယ်မောသံကို အလယ်မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်။
ဒီဓာတ်ပုံကို သဘောကျတယ်။ ဆံပင်ညှပ်ဖို့ လိုတယ်၊ နောက်ခံက နွေးနွေးထွေးထွေးရှိတဲ့ သစ်သား၊ မီးရောင်က ကြိုဆိုနေပြီး၊ ရိုးရိုး burgundy တီရှပ်ကို ၀တ်ထားတယ်၊ ဒီဓါတ်ပုံ is ငါ့ကို အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ဖြတ်ညှပ်ကပ်ပြီး တင်လိုက်တယ်။ LinkedIn တို့ ပရိုဖိုင်းကို။
LinkedIn ရှိ Douglas နှင့် ချိတ်ဆက်ကြည့်ရှုပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ဟာ LinkedIn မှာ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်သည် ဟောပြောသူ၊ စာရေးဆရာ၊ အတိုင်ပင်ခံနှင့် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ LinkedIn ရှိ အလားအလာရှိသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ဖောက်သည် သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုတော့သည်မှာ တစ်ပတ်မျှသာ ကြာမြင့်ပါသည်။ မင်းရဲ့ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံ ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ငါလုံးဝစိတ်ဖိစီးလို့မရဘူး။ မဆုံခင်မှာ မင်းရဲ့အပြုံးကို မြင်ချင်တယ် ခင်မင်ရင်းနှီးသူ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပီသပြီး အဆက်အသွယ်ကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်လို့ ခံစားချင်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကနေ ရနိုင်မလား။ ဒါတွေအားလုံးမဟုတ်ဘူး...ဒါပေမယ့် first impression တော့ရနိုင်တယ်။
LinkedIn ရုပ်ပုံသည် သင်၏ ငှားရမ်းနိုင်စွမ်းအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပါသလား။
Adam Grucela at Passport-Photo.online ဤအင်ဖိုဂရပ်ဖစ်ရှိ စာရင်းအင်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ထူးထူးခြားခြား အကြံဉာဏ်အချို့ဖြင့် ဤအဓိကမေးခွန်းကို ဖြေဆိုခဲ့သည်။ Infographic သည် LinkedIn ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံ၏ အရေးပါသော ရှုထောင့်အချို့ကို ထိတွေ့သည်... ထိပ်တန်းလက္ခဏာများ အပါအဝင်-
ဆွဲဆောင် - ဧည့်သည်ကို သဘောကျယုံ ကြည်ပါစေ။
ကျွမ်းကျင်မှု - ရုပ်ပုံအား သင့်နယ်ပယ်တွင် ချိန်ညှိပါ။
အရည်အသွေး - ကောင်းမွန်သောဓာတ်ပုံများကိုသာ upload လုပ်ပါ။
ပုဂ္ဂိုလ် - သူတို့ကို သင် ပိုသိအောင်လုပ်ပါ။
၎င်းတို့သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဓာတ်ပုံဆရာကို ငှားရမ်းခြင်း၊ အရည်အသွေးမြင့် ရုပ်ပုံများကို အသုံးပြုခြင်း၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန်၊ ကောင်းမွန်သော ကိုယ်ဟန်အနေအထားကို အသုံးပြုပြီး သင်၏ ဆွဲဆောင်မှုကို ပြသခြင်းကဲ့သို့သော အကြံပြုချက်အချို့ကို ပေးဆောင်ပါသည်။ အနီရောင်အလံအချို့ကိုလည်း ပေးသည်။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမြင်ရသော မျက်နှာကို မသုံးပါနှင့်။
ကြည်လင်ပြတ်သားသော ဓာတ်ပုံကို မသုံးပါနှင့်။
ကုမ္ပဏီဓာတ်ပုံကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတစ်ခုထက် မသုံးပါနှင့်။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေဖို့ အပေါ်ကနေ မလွန်ဆန်ပါနဲ့။
အပြုံးမပါဘဲ ဓာတ်ပုံကို မသုံးပါနှင့်။
infographic သည် သင့်ဓာတ်ပုံသည် အရာအားလုံးမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း သင်သိစေသည်… သင့် LinkedIn ပရိုဖိုင်တစ်ခုလုံးကို ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် သင့်ချိတ်ဆက်နိုင်မှုနှင့် ငှားရမ်းခံရနိုင်မှုကို တိုးမြင့်လာစေရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြားသော ဆောင်းပါးများနှင့် ဤအရာများ အပါအဝင် infographic များကို သေချာဖတ်ပါ။ သင်၏ LinkedIn ပရိုဖိုင်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ဒါတွေအပြင် ထပ်လောင်းပါ။ LinkedIn ပရိုဖိုင် အကြံပြုချက်များ.
ဒါပေမယ့် ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာကို မုန်းတယ်။
ငါနားလည်တယ် ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့ ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံက မဟုတ် သင့်အတွက်! သင်ကိုယ်တိုင် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး အသုံးပြုရတာကို မုန်းတယ်ဆိုရင် သင်ယုံကြည်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းကို မေးကြည့်ပါ။ ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးနှင့် သူငယ်ချင်းတစ်ဦးကို ခေါ်ဆောင်သွားကာ ဒါဇင်အနည်းငယ်မျှ ရိုက်ယူပြီးနောက် သင့်ယုံကြည်ရသော သူငယ်ချင်းကို အသုံးပြုရန် ဓာတ်ပုံကို ရွေးချယ်ခွင့်ပေးခြင်းကဲ့သို့ မဟုတ်ပါ။ သူတို့က မင်းကို သိတယ်။ ဘယ်ဟာက မင်းကို ကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုတာ တကယ်ကို ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာ သူတို့သိလိမ့်မယ်။
Tags: douglas karrinfographiclinkedinlinkedin headshotlinkedin ဓာတ်ပုံlinkedin ပုံlinkedin ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံပရိုဖိုင်းကိုဓာတ်ပုံပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံ အကြံပြုချက်များ